Qiimaha iyo taariikhda siideynta Doogee S98 Pro waa hore loo yaqaan | Qalabka Wararka
Qiimaha iyo taariikhda la sii daayo Doogee S98 Pro waa la ogaa
Qolka Ignatius | 17/05/2022 19:37 | La cusbooneysiiyay 17/05/2022 19:38 | Mobiles, Telefoon
Bishii hore waxaan ka hadalnay sii deynta soo socota ee saaraha Doogee, the Doogee S98 Pro, qalab lagu garto a nashqada shisheeye waxyooday, kamarad aragga habeenkii, dareeraha infrared iyo iyada oo aan la ilaawin in ay ku dhacdo qaybta taleefannada casriga ah ee shoogga u adkaysta.
Laakiin qaybta ugu muhiimsan ee isticmaalayaasha badan ayaa wali maqan: qiimaha iyo helitaanka. Ugu dambeyntii, shirkadu waxay ugu dambeyntii ku dhawaaqday macluumaadkaas. Waxay noqon doontaa Juun 6 ee soo socota, markaa wax ka yar hal bil ayaa hadhay, si, haddii aad jeceshahay waxa Doogee S98 ku siiyo, aad iibsan karto oo aad si fiican uga faa'iidaysan karto astaamaha ay bixiso.
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan sifooyinka iyo sida aan uga faa'iideysan karno, waxaan kugu martiqaadayaa inaad fiiriso muuqaalkan soo socda iyo tilmaamaha aan ku tusineyno hoos.
1.1 Qaybta sawirka
1.2 Awooda Doogee S98
1.3 FullHD+ shaashadda
1.4 Battery dhowr maalmood
1.5 Tilmaamo kale
2 Qiimaha iyo helitaanka Doogee S98 Pro
Mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee isticmaalayaasha marka ay go'aansanayaan hal mobile ama mid kale waa qaybta sawirada. Doogge S98 Pro-ga cusub waxa ku jira a 48 MP kamarada ugu weyn oo ay samaysay Sony kaas oo isticmaala IMX582 sensor.
Qolka weyn ee ku xigta, waxaan helnaa a kamarad aragga habeenkii, oo leh dareeme kale oo ay soo saartay Sony (IMX 350) kaas oo gaaraya 20 MP.
Intaa waxaa dheer, sidaan ku sheegay bilawga maqaalkan, Doogee S98 Pro waxaa ku jira kamarad dheeri ah oo leh dareeraha kulaylka, oo ku habboon hubi heerkulka meelaha ama walxaha deegaankayaga.
Marka loo eego soo saaraha, waxay isticmaashaa InfiRay sensor, dareeme bixiya wax ka badan xalinta kulaylka double marka loo eego dareemayaasha kale ee suuqa.
Waxay leedahay heer sare oo jir ah oo ah 25 Hz kaas oo dammaanad qaadaya a sax weyn iyo faahfaahin Sawirada kaa caawinaya in lagu ogaado huurka, heerkulka sare, dhibaatooyinka shaqada...
Waxa ku jira algorithm-ka Dual Spectrum Fusion ee ogolaanaya isku dar sawirada kamarada kulaylka leh iyo sawirada kamarada ugu weyn. Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaluhu inuu helo meesha saxda ah ee dhibaatada isagoon isku dayin inuu ogaado isagoo falanqeynaya sawirka infrared.
Haddii aan ka hadalno ku saabsan kamarad hore, Markan, Doogee guys waxay ku tiirsan yihiin soo saaraha Samsung, oo leh 5 MP S3K9P16SP sensor, kamarad ku taal qaybta sare ee dhexe ee shaashadda.
Awooda Doogee S98
Si loo maareeyo qalabka oo dhan, Doogee wuxuu ku tiirsan yahay soo saaraha MediaTek oo leh processor-ka G96, habka 8-core ee 2,05 GHz, sidaas darteed waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa si aan u ciyaarno ciyaaraha dhib la'aan.
Iyadoo la socota processor-ka G96, waxaan ka heleynaa 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah. Haddii taasi gaaban tahay, waxaad kordhin kartaa booska kaydinta ilaa 512 GB adoo isticmaalaya kaarka microSD.
Sida qalabku u awood badan yahay, haddii aanu ku jirin shaashad tayo leh, waa wax aan faa'iido lahayn. Doogee S98 Pro waxaa ku jira a Shaashad 6,3-inji ah oo leh FullHD + xallin, Nooca LCD oo lagu ilaaliyo tignoolajiyada Cornig Gorilla Glass.
Iyadoo ku xiran isticmaalka aan ka samayno qalabka, a 6.000 mAh batari, Waxaan aadi karnaa dhowr maalmood annagoo aan u dhowayn dabeysha. Oo, markaan ay tahay, waxaan si dhakhso ah u dallaci karnaa annagoo taageeraya 33W ku dallacaadda degdegga ah iyadoo la adeegsanayo fiilada USB-C.
Laakiin, haddii aynaan ku degdegin in la soo shubo, oo aan doorbidno in aan isticmaalno kaydka xogta xukun wireless, shaqadan sidoo kale waa la heli karaa, in kasta oo ay ku jirto awood hoose, maadaama ay kaliya ku habboon tahay 15W.
Marka lagu daro awooda iyo qaybta sawirka, taleefanka casriga ah ee aan lahayn chip NFC hadda macno badan ma samaynayo. Doogee S98 Pro waxaa ku jira a Qalabka NFC kaas oo Google Pay aanu si raaxo leh wax kaga bixin karno casrigayaga casriga ah.
Dhanka amniga, Doogee S98 Pro waxaa ku jira nidaam aqoonsiga faraha ee badhanka awooda, markaa mar kasta oo aan galno, marka aan riixno batoonka, si toos ah ayaa loo furayaa iyada oo aan la ogeyn.
Waxay la jaanqaadi kartaa GPS-ka, Galileo, BeiDou iyo dayax-gacmeedyada navigation-ka ee Glonass. Intaa waxaa dheer, waxaa ka mid ah IP68, IP69K iyo shahaado militariga MIL-STD-810H.
Nidaamka qalliinka waa Android 12 oo ay ku jirto 3 sano oo cusbooneysiin amni ah iyada oo loo marayo OTA. Sida aan arki karno, Doogee wuxuu na siinayaa tiro badan oo shaqeyn ah iyo astaamo qiimo macquul ah, qiimo aan ka hadli doono hoos.
Qiimaha iyo helitaanka Doogee S98 Pro
Qiimaha rasmiga ah ee Doogee S98 Pro waa 439 dollars. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad gacantaada ku hesho wakhtiga la sii daayay Juun 6, waxaad ka iibsan kartaa at DoogeeMall kaliya $329, taas oo ah a 110 dollar dhimis oo ku saabsan qiimaha ugu dambeeya.
Dabcan, soo jeedintan hordhaca ah waxa la heli karaa oo keliya 4ta maalmood ee ka dib marka la bilaabo, Ilaa Juun 10. Laakiin, marka lagu daro, haddii dhaqaalahaagu xitaa xoogaa cadaalad ah, waxaad mari kartaa boggeeda rasmiga ah oo aad iska diiwaan geliso raffle si aad u hesho Doogee S98 Pro bilaash.
Hadaad rabto inaad ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabkan, waxaad ku samayn kartaa adigoo booqanaya kooda S98 Pro website-ka rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Qiimaha iyo taariikhda la sii daayo Doogee S98 Pro waa la ogaa
Sida loo sameeyo Facebook